China Tank yepamusoro fekitori uye vagadziri | Chiono
* 100% combed mhete-yakarukwa yakanaka donje jersey
* Inowanikwa mumavara anopfuura makumi matatu, ruvara rwepantone runogona kuvezwa sezvaunoda
* Matching emhuri anowanikwa (chingotitumira meseji)
* Kupisa kupisa kudhinda, silika skrini yekudhinda, embroidery nezvimwe zviripo.
Iyo yemafashoni, inonakidza uye, kupfuura zvese, rakasununguka juzi rakapfava, vintage rakafuridzirwa tangi iro rinonzwa kunge wave naro rako kwemakore. yakagadzirira kuenda neboka rako kumahombekombe kana chero chiitiko chekunze kwezhizha. Aya matangi akanaka mukati megore & zhizha !!!
Pashure: tsika yemhando yevana vana yunifomu yekotoni pique polo shati
Chirimwa Tangi Pamusoro
Polyester Tank Misoro